Nkọwa:Ejiri ikpuchi ụkwụ nke Baseball,Ejiri nkuzi nkuzi,38cm Mkpuchi na-ekpuchi ihu igwe
Home > Ngwaahịa > Ekpuchi Uwe Nkwado Silicone > 38cm diameter baseball coaches steering wheel cover
Ihe Nlereanya.: SWC1802
Ihe mkpuchi windo baseball bụ 100% nri mkpụrụ silicone, n'ihi ya, ọ bụ ihe na-ekpo ọkụ ma dị nro. A na -ebipụta ụdị ihe ọ bụla a na-etinye na mkpuchi ikpo ígwè nke Silicone . Ya mere, OEM ma ọ bụ ODM na-anabata. Anyị nwekwara ike ime nke a maka gị. Na silicone n'iru wheel cover nwere ike na-asa mgbe ọ bụ unyi, n'ihi ya, ọ bụ imegharị ihe maka iji. 38cm diamita ihu igwe mkpuchi ọ bụghị nanị na ime ka ụgbọ ala gị mara mma, ka ị hụ ya n'anya nke ukwuu, ma nwekwara ike iji ya mee ihe maka ọtụtụ ụgbọala. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ma ọ bụ mkpuchi wheel , ị nwere ike ịkpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị.
Ejiri ikpuchi ụkwụ nke Baseball Ejiri nkuzi nkuzi 38cm Mkpuchi na-ekpuchi ihu igwe Ejiri ikpuchi ụgbọ ala Ejiri mkpuchi silik nke BMW Ejiri mkpuchi mkpuchi ụgbọala Ejiri mkpuchi dị mma Ejiri mkpuchi Silicone Car Renault